စက်တင်ဘာလ 2015 |3၏စာမျက်နှာ 33 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 3)
2015 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲအောက်တိုဘာ 14 အပေါ်ရေဒီယိုပညာရှင်များများအတွက်နှစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာ Sessions အထူးပြုလုပ်ပါရန်
MELVILLE, နယူးယော့ - စက်တင်ဘာ 24, 2015 - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အောက်တိုဘာ 14, Roz Clark က, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး၏ဒါရိုက်တာနှင့်ကော့ Media Group သို့များအတွက်စနစ်များအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် Milford Smith က သာ. ကွီးမွတျမီဒီယာ Inc ကိုများအတွက်အင်ဂျင်နီယာ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလိမ့်မည်နှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အဆိုပါ 2015 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာအစည်းအဝေးများ။ အောက်တိုဘာ 13-16 Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါအတွက် Carib Royal Hotel, အလေးရက်ကြာမှာအရပျကိုယူပြီး ...
ALBtelecom IPTV / OTT န်ဆောင်မှုများ၏ချဲ့ဘို့သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' Vibe XT1000 Transcoder ရွေးကောက်
RENNES, ပြင်သစ် - စက်တင်ဘာ 24, 2015 - သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကယနေ့ ALBtelecom, အယ်လ်ဘေးနီးယား၏အကြီးဆုံးတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေး, ယင်း၏ IPTV / OTT ပလက်ဖောင်းခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့စီမံကိန်းများအတွက်ဆုရ Vibe (R) ALBtv XT1000 Xtream Transcoder ရွေးကောက်တော်မူခြင်း, မူကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ တိုက်ရိုက်လွှလိုင်းများ 240 မှန်ဆောင်မှုကိုချဲ့ထွင်။ အဆိုပါ Vibe XT1000 အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, မြင့်သောသိပ်သည်းဆနှင့်အသစ်အများအတွက်လိုအပ်သည့်ထူးချွန်သောဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုပေးသွားမှာပါ ...
by: Stan Moote, CTO, IABM အခုအချိန်မှာတစ်ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်ထိပ်တန်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထဲကတစ်ခုက IP ဖို့အကူးအပြောင်းသည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ဤသည်ဖောင်းပွ, မရေရာဒွိဟနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ပြည့်စုံသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ စံချိန်စံညွှန်းများဖန်တီးလျက်ရှိသည်, plug-in ပွဲတော်တွင်ဆဲဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရောင်းချသူ IP ကိုရှေ့နှင့်အလယ်ဗဟိုကိုစောင့်ရှောက်ရန်စီးပွားဖြစ်ဖြေရှင်းချက်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ အတော်များများကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ...
ဘယ်လို HEVC, 4K နှင့်မိုးတိမ်အဆိုပါရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပြောင်းလဲနေကြသည်
စားသုံးသူဝယ်လိုအားမြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကြီးထွားဖို့ဆက်လက်များအတွက်အမျှ Sven Freudenfeld, Kontron အားဖြင့်, အက Ultra HD (UHD) / 4K ရုပ်မြင်သံကြားဈေးကွက်ဖွင့်အပူသည်။ IHS ကနေမကြာသေးမှီကသုတေသန 4K တီဗီကနေဝင်ငွေ 52 အတွက် $ 2020 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်အရောင်းအပြင်အဲဒီမှာထုတ်လွှင့်, ပေးဆောင်-TV ကိုတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာကိုအောင်မြင်စွာနိုင်ပါလိမ့်မည် ...
A + E ကိုကွန်ယက်ပိုမိုမြန်ဆန် Aframe နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားခန့်ရောင်းချနိုင်ဖို့အကြောင်းအရာလာ
A + E ကိုကွန်ရက် '' ဆုရ programming ကို 330 နိုင်ငံများတွင်ပိုပြီးသန်း 200 + ထက် subscriber များအားရောက်ရှိ။ အဆိုပါအကြောင်းအရာ FYI ရုပ်သံလိုင်းအမှတ်တံဆိပ်, နောက်ခံ, တစ်ဦးက & E ကို, တစ်သက်တာ, H2, ရာဇဝတ်မှု + စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်၎င်း၏အစုစုကိုတဆင့်ဖြန့်ဝေသည်နှင့်တတိယပါတီထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဖောက်သည်လိုင်စင်ရဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့၏အမေရိကန်အခြေစိုက်လိုင်းများအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အစီအစဉ်များအပြင်, A + E ကိုကွန်ယက်များကဲ့သို့အောင်မြင်သော franchise များအတွက် format နဲ့အခွင့်အရေးများလိုင်စင်ရ ...
PIXSPAN AUTODESK Creative Finish suite နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းခြင်းကိုကြေညာ
ROCKVILLE, Maryland (စက်တင်ဘာလ 23, 2015) - Pixspan, Inc Autodesk, Inc သည့် Autodesk ကို Creative Finish suite မှာ Pixspan ရဲ့အပြည့်အဝ resolution ကိုနည်းနည်း-အတိအကျ software ကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ Autodesk ရဲ့လာမည့် Flame ဟာအိတ်စတန်းရှင်း 1 လွှတ်ပေးရေး 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေချိန်မှာသိုလှောင်မှုနှင့်ကွန်ယက်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ငွေစုအဖြစ်ပိုမိုမြန်ဆန်ပူးပေါင်းခွင့်ပြုရန် Flame ဟာပရီမီယံ, Flame ဟာ, အိုးပေါကျကှဲနှင့်တောက်ပအတွင်း Pixspan ပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ် ...
အနီရောင်ဧရာကို Magic Bullet Suite 12.1 Update ကိုအတူအရောင်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွေ့အကြုံတိုးချဲ့
Premiere Pro ကိုမာကျူရီပြသမှုနှင့်အတူရီးရဲလ်အချိန်အရောင်ဆုံးမခြင်း။ နယူး trackpad ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်။ DaVinci ဖြေရှင်းရန်များအတွက်ပံ့ပိုးမှု။ နယူးကြိုပြီးချမှတ်ထားခြင်းနှင့် LUTs ကြည့်ခြင်း။ လက်ပံ, အော်ရီဂွန် - စက်တင်ဘာလ 23, 2015 - အနီရောင်ဧရာယနေ့မှော် Bullet Suite 12.1 သည်ကို Magic Bullet Suite 12 အရောင်ဆုံးမခြင်းမှအခမဲ့ update ကို၏ရရှိမှုထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနှင့်ရုပ်ရှင်ဖြေရှင်းချက်လှပါတယ်။ အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ, ရလာဒ်ကဒိနှင့်အတူထုပ်ပိုး ...
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းဃ: ဝက်ဘ်ကအသံနှင့်အတူဒဏ်ငွေတင်ပြစံချိန်စံညွှန်း Visual
Salt Lake City, စကျတငျဘာ 23, 2015 - Visual ဝက်ဘ်ကအသံ (ဝက်ဘ်က A / V ကို) အစီအစဉ်များနှင့် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများအတွက်ပြပွဲခန်းမများနှင့်နယ်ပယ်တွင်အကြီးစားကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ရပ်များ ပေး. စီရင်။ အတှေ့အကွုံ 60 နှစ်ပေါင်းနှင့်တကွ, ကုမ္ပဏီကျွမ်းကျင်ပိုင်များအတွက်ခိုင်မာသောဂုဏ်သတင်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ တိုင်းအဖြစ်အပျက်တင်ဆက်မှုအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်, Trevor လူငယ်တို့, ဝက်ဘ်က A / V ကိုမှာအသံ၏ဦးခေါင်း, 'DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအပေါ်မှီခို ...
3 ၏စာမျက်နှာ 33«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»